Edere site Tranquillus | Jul 30, 2018 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ihe akụkọ ahụ dị mkpa bụ na ọ na-enye gị ozi niile na-enweghị ị ga-agafe otu narị peeji. Ọ bụrụ na anyị ga-ejedebe onwe anyị iji detuo mgbanwe n'oge nzukọ, ị ga-enwe akwụkwọ nke nnukwu olu. Ma a na-ezere nke a mgbe a na-eme akụkọ ahụ ma karịsịa mgbe emere ya na usoro ziri ezi. Na na-aga nzukọ, ọmụmụ ihe, ọrụ, ọtụtụ isi na-arụrịta ụka, a na-ekwu okwu ogologo oge, a na-amata ọtụtụ ihe ịma aka. A ghaghị inye ihe ndị a niile ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị seminarị ma ọ bụ ndị na-akwado ọrụ. mgbe, esi dee akụkọ dị mkpa n’okwu a? Ide ya abụghị ọrụ dị mfe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga-egosipụta ihe niile iwu chọrọ na akụkọ.
Ọchịchị na nkọwa zuru ezu na ide edemede
Akuko ahụ kwesịrị ịkọcha mkpebi niile e mere n'oge nzukọ ahụ yana isiokwu ndị a na-amụ. Ọ ghaghị ịpụta usoro izugbe niile e mere n'oge mkparịta ụka. Ọ bụ ebe a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịga nzukọ n'otu oge ahụ n'ihi ọrịa ma ọ bụ ihe ọzọ. Ya mere, akụkọ ahụ na-enye ohere ịnwe otu ọkwa dịka ndị ọzọ. na ede akụkọ edere ya n'ụdị edemede, ọ dị nnọọ iche na nkeji ma ọ bụ nkwupụta dị mfe nke mkparịta ụka ahụ.
Ọ bụrụ na edere akwụkwọ na nzukọ ahụ, a ga-akpọtụrụ ha. Tinyekwa saịtị ebe ịchọta ha ma ọ bụ otú ahụ, mepụtaghachi ihe ị ga-etinye na akụkọ gị. Mgbe e mere mkpebi ka e wee mee omume, ọ ga-adị mkpa iji dee onye ga-egbu ha. N'otu ụzọ ahụ, ọ ga-adị mkpa iji mee ka a mata oge ikpebipụtara n'oge a na-ezukọ. Ozugbo a kọwachara omume ndị a, ọ ga-adị mfe inye ndị na-eme ihe nkiri ahụ n'ala ọmụmụ ihe ndị ọzọ maka nchịkọta nke ihe e meworo n'ụzọ dị nkenke. Dee akụkọ, choro ka o lezie anya ka ha ghara inwe nnọchiteanya kpamkpam, ihe ndi a ga-edozi, ihe isi ike ndi a zutere n'oge nzuko a aghaghi ime. Na-egosikwa ihe niile positives a chọpụtara.
Mara otú e si ede akụkọ dị mkpa
Un akụkọ dị mkpa ga-ede ede n'ime awa nke ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na ị na-echere ụbọchị ụfọdụ, ọ ga-abụ na ị ga-ahapụ ụfọdụ ozi dị mkpa. N'otu ụzọ ahụ, idebe ihe ederede na-enye gị ohere itinye ihe niile ahụ na ọnọdụ ha. Izi ezi bụ isi okwu edere ezigbo akụkọ. Ozi niile dị mkpa nye onye na-agụ ga-apụta ozugbo. Zere ikpu oke oke ma ọ bụ uzo ogologo oge. Gaa na isi.
Yet dee ezigbo akụkọọ dị mkpa iji gosipụta isi ihe ndị nwere mmasị maka agbata. Mee ederede zuru oke n'ihi na ọ ga - eme ka ịgụ ihe dịkwuo mma. N'ozuzu, nkwupụta na mmeghe, mmepe na nkwubi okwu bụ akwụkwọ kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ịnweta ọtụtụ paragraf dị na akụkụ nke akụkọ ahụ ka e nwere ihe a na-amụ. E kwesịkwara iji atụmatụ ahụ kpọrọ ihe. Ị ga-eme atụmatụ nyocha ma ọ bụrụ naanị otu nchegbu echere nzukọ ahụ dum. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na e meela ọtụtụ isi, ị ga-enwe usoro atụmatụ ha nke ga-eweta ha n'usoro na-agbada dị mkpa. Na ọkwa nke ngwụcha akụkọ, ọ ga-adị mkpa na ihe ndị fọdụrụnụ ka a ga-amụ bụ ihe doro anya. Otu ihe ahụ, n'ezie, maka ọrụ ndị a ka ga-eme. N'ikpeazụ, iji dee akụkọ dị mkpa, ọ ga-aka mma ịnweta ezi ihe ọmụma na mpaghara a ga-atụle okwu ha. Nke a ga-eme ka ederede okwu dị mkpirikpi na ihe odide, tinyere okwu kwesịrị ekwesị.
Nchịkọta maka ide edemede
Nkwanye ùgwù ederede maka ide edemede dị mkpa, ọ na-enye ohere ịbụ ebumnobi na ikwesị ntụkwasị obi na ihe omume. Ikwesighi inye echiche nke aka gi ma obu inwe ekele maka ihe e kpebiri. Ga-ezere ịdepụta okwu niile nke ndị sonyere na nzukọ ahụ. Ga- emerịrị onwe gị nanị site n’ịkọwa isi ihe e kwuworo, isi ihe ndị ahụ.
Iji mezuo nke a, ọ bụ ọrụ gị ịhọrọ ozi. Na nhazi gị, zere karịsịa ka ị lekwasị anya na ngwa ahụ ma isi anaghị apụta site na akụkọ ahụ. Gbalịsie ike ichikota ma bulie ozi a ka o buru ibu.
Zere iji okwu nkeonwe, na ndị ọzọ okwu, zere "M" nakwa "US", ihe ọ bụla nke na-atụ aro onye dere akwụkwọ. Ebe ọ bụ na ịchọrọ ịnọpụ iche dị ka o kwere mee, ejila nkọwa ma ọ bụ ilu nke ekele. Kpachara anya iwelata ikwughachi ihe ederede gị.
N'otu aka ahụ, a ghaghị ịkatọ ihe niile na-ewepụ arụmụka ahụ. Ọ dịkwa mkpa iji nyochaa asụsụ gị, okwu na nzere gị. French ị ga-eji mee ihe ga-empeccable.
Họrọ ụdị nke ide akụkọ
Tupu ị malite, buru ụzọ chee echiche banyere ịhọrọ ya ederede ederede na ị ga-eme:
Uzo zuru oke maka ndi mbido
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị chọrọ dee akụkọọ kaara gị mma ịhọrọ ụdị ịgba aghara. Ụdị a bụ ọbụna ihe dabara adaba mgbe a na-eji PowerPoint mee ihe ngosi na seminar ma ọ bụ nzukọ. Ya mere ọ ga-adị mkpa iji zere iwelata ozi ahụ n'ụzọ na-enweghị isi. Otú ọ dị, ọ ga-adị mkpa ka ị chee banyere ịmegharị ihe ị na-ede, iji zere ikwu ihe niile, nke agaghị abụ akụkọ ọzọ. Iji họrọ ụdị a, ị ghaghị ilezi anya ịdekọ semina.
GỤỌ Dee ozi email ma ọ bụrụ na enweghị
Ị nwere ike weta ngwaọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ịrịọ ihe ndekọ nke ụlọ nchịkwa mere ka ụlọ ahụ dị njikere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdekọ, detuo ihe site n'imelata ihe ọbụla i nwere ike. Na-arụ ọrụ nke oma na ngwa ngwa. Akwụkwọ niile a ga-ekerịta n'oge nzukọ ọmụmụ ihe ga-adị gị. Maka akwụkwọ ndị a, ịnwere ike itinye ha na nkeji. Enweghị mkpa ikwughachi. Naanị jide n'aka na ị gụnyere ha na akụkọ nke akụkọ ahụ.
Ọ ga-enwe ụzọ kpọmkwem na ịnọpụ iche. N'okwu arụmụka, ọ ka mma ịhọrọ ụdị aha. Ụdị a ga-eme ka o kwe omume ịkpọ aha ahụ, aha mbụ na ọrụ ndị ọ bụla kwuru.
Na ọkwa ọkwa
Mee ka ụbọchị ahụ doo anya, ndị na-agụ ya na usoro ihe omume nke agbasoro nzukọ. Jide n'aka na ihe ọmụma gị dị ka onye a pụrụ ịtụkwasị obi dịka o kwere mee site na imelite ya ka nzukọ ọmụmụ ihe na-aga n'ihu.
Kedu ozi kwesịrị ịchọta na akụkọ?
Yet kọọrọ akụkọ banyere nzukọị ghaghị ịmalite na aha ụlọ ọrụ ahụ na ajụjụ. Tinyekwa nhazi ya. N'ikpeazụ, mepụta aha nke akwụkwọ ahụ na onye onye dere ya. Tinye kwa ụbọchị nke nzukọ gị, nakwa ebe a na-edebe ya. Na mgbakwunye, ọ ga-adị mkpa iji gụọ ndị na-ekere òkè na nzukọ ahụ. Kwuo ndị na-abịaghị yana ndị nyere ihe ngọpụ maka enweghị ha.
N'ime ndị a nile, na-egosiputa ọkwa ọrụ ha n'ime ụlọ ọrụ. Ọzọ, mee ka a mata nzube nke nzukọ gị, nke a maara dị ka usoro. Mgbe ahụ, chee isiokwu ndị a na-arụrịta ụka site n'itinye onye ọ bụla aha. Ọ ga-adị mkpa na mkpebi ndị e mere mgbe njedebe nke arụmụka ahụ bịara doo anya. Echefula ịbanye, ọ dị mkpa ka ị mara onye onye ahụ na-ede akụkọ ahụ.
Nkwanye maka ide ihe akụkọ
La dee akụkọ banyere ozi bụ ọbụna ọrụ a kapịrị ọnụ karị. Ebumnuche nyocha, ọrụ enyemaka ndị mmadụ, ọrụ ndị na-edekọ ego ma ọ bụ ọbụna ọrụ iwu ga-abanye n'otu akụkọ. E kwesiri iziga nchịkọta a na onye nkwado ndị ozi. N'okwu a, ị ga-emerịrị ka ihe ị na-ahụ pụta ìhè, kamakwa ndụmọdụ gị na nyocha gị:
Nke a na-edepụta akwụkwọ
Na peeji mbụ nke akụkọ gị, ị ghaghị ịkọ aha ndị nnọchiteanya na aha onye nnọchiteanya ahụ. Ụbọchị, nzube nke ọrụ ahụ na oge ogologo nke ọrụ ahụ ga-apụta. Na nchịkọta nchịkọta, ọ ghaghị igosipụta n'ụzọ doro anya akụkụ nke ndị ọrụ ahụ. Ọ ka mma ịme nchịkọta, tupu ịmalite iwebata.
GỤỌ Template Email iji kwenye oge
Okwu mmeghe ga-abụ kpọmkwem ma depụta nsogbu niile e kwuru okwu n'oge ọrụ ahụ. Na mmepe, ị ghaghị igosi ụlọ ọrụ nke ndị na-elekọta gị. Ị ga-edekwa ihe kacha mkpa nke akwụkwọ ozi ahụ nyere ikike ọrụ ahụ. Nke a na-eweta usoro mgbasaozi na mmefu ego.
Ndị ọzọ na-ekwu
Ihe a, aha kọmitii ndị ọkachamara na ọrụ ha. Usoro nka, ihe isi ike ndi bu ikike nke ozi. Ihe ndị a niile kwesịrị ịdị na ndekọ. Mgbe ọ bụla a ga-eme ajụjụ ọnụ na ndị otu ihe owuwu ahụ, ọ ga-adị mkpa iji mezuo akụkọ kwekọrọ na itinye ha na akụkọ izugbe nke ozi ahụ.
Ọ bụrụ na i meela ka amaghị aha nke ụfọdụ n'ime ndị na-eme njem gị n'oge ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike iweghachite ozi ha zigara gị n'ụdị nchịkọta akụkọ. Jide n'aka na ị ga-egosipụta mmụọ onye ọka iwu ahụ na njedebe nke ọma. Ị nwere ike imecha kọọ akụkọ maka nyochaa, akụkọ, nha na karịsịa, iji mee ka akwụkwọ ndekọ zuru ezu.
Yet dee ezigbo akụkọ, akwụkwọ ahụ ga-abụ nkenke na nkenke, ịnwere ike iji ihe osise, foto na ọbụna atụmatụ. Ọ bụrụ na nyocha gị nwere nkọwa zuru ezu, tinye ha na ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike ịgụ akwụkwọ a, zere usoro nkà na ụzụ na-enweghị ike ịghọta onye na-agụkarị ihe. Ọ bụrụ na ị ga-etinye ha n'ọrụ, kọwaa ya ngwa ngwa.
Nkwupụta gị kwesịrị inwe isiokwu na isiokwu nta nwere akara zuru oke, paragraf na nọmba. Echela na ị ga-etinye akwụkwọ niile ahụ. Mee ka ndị ị kpọtụrụ aha na akụkọ ozi gị. Zere mmejọ ndị na-emerụ ndị ọkachamara n'akụkụ ọrụ gị. Budata mgbazi ngwanrọ dịka Cordial ma ọ bụ Antidote iji dozie njehie. Ma ọ bụ, mee ka onye dị gị nso gụọ akwụkwọ ikpeazụ nke ga-atụlekwa mkpa ọrụ gị bara. O nwedịrị ike ịgwa gị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ kwere nghọta ma ọ bụ na ọ bụghị.
Akụkọ ahụ nwere ike imecha mee mkpụmkpụ ma ọ bụ ọbụna synoptic. Ejiri synoptic na tebụl dị na Ụdị ma ọ bụ Excel. N'aka nke ọzọ, stenographic ahụ na-esonye ihe ọmụma niile na usoro usoro oge site na ịmepụta nsụgharị nke nwere ike itinye mgbe ụfọdụ. Dee nke ọma, akụkọ gị ga-abụ ihe nchekwa na ozi ndị ọzọ maka ndị ọrụ niile.
Kedu esi ede akụkọ dị mkpa? August 16th, 2018Tranquillus
gara agaBụrụ ihe nchọgharị Google
-esonụKedu otu esi ede ihe nchịkọta ọkachamara?